Ụlọ ọrụ injinia&nhazi, ndị na-eweta - China Engineering&Ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe
Ịkwado Ebu Plastic
Nlekọta ihe eji eme ihe eji eme ihe na-edozi ihe dị mkpa karịa nrụzi ebu. The ọzọ ugboro nke ebu mmezi, na mkpumkpu ndụ ya. The mma ebu na-nọgidere, ogologo ndụ ọrụ ya ga-.Ebu mmezi na-tumadi kewara n'ime atọ isi; 1.Mold kwa ụbọchị mmezi: ụdị niile…
Ndị na-ebu ihe na-emepụta ebu
Anyị bụ otu n'ime ndị ọkachamara plastic ngwaahịa n'ichepụta & ebu na-eme suppliers.We ipuiche n'ichepụta ụdị nile nke plastic mmepụta, nakwa anyị na-enye ebu imewe, na-eme ka ọrụ. Anyị nọ n'ahịrị a karịa afọ 15, nwere ike inyere gị aka chepụta na ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ gị,…
JS MOLD Mold nwere ọgaranya nwere ahụmahụ injection ịkpụzi ngwá ọrụ imewe otu-onye maara otú e si ebelata mmefu aka na ngwá ọrụ imewe na n'ichepụta usoro mgbe amị akụkụ nke elu àgwà-nwere ike ịpụta ọdịiche dị n'etiti ịga nke ọma na ọdịda gị oru ngo. JS MOLD Mold bụ ụlọ ọrụ…
Omenala nkenke Plastic Mold
JS MOLD Mold na-enye nhazi nkenke plastic ịkpụzi Ọrụ, sistemu ịgba ntụtụ anyị bụ usoro nke a na-etinye n'ọrụ na-elekwasị anya n'inweta arụmọrụ max n'oge ọ bụla nke imepụta ebu, nyocha, mmepụta, ịnwale na ịkpụzi mmepụta nke ndị otu ahụmịhe bara ụba gburu. na-eji…